PrefDelete: mamafa ny tweaks avy amin'ny iOS Settings (Cydia) | Vaovao IPhone
Iray amin'ireo asa maharikoriko indrindra an'i Cydia ny famafana ny zavatra apetratsika satria rehefa mampidina tweak iray izahay, miaraka aminy ny fanitarana sy / na fampiharana hafa izay tena miasa tokoa izay nofidininay. Raha ny fanesorana, Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, izahay ihany no mamafa ireo tweaks fa tsy izay napetraka miaraka aminy. Androany aho dia manolotra PrefDelete, tweak izay azontsika sintonina amin'ny Cydia misy ny asany avelao ny mpampiasa hamafa ireo bitsika avy amin'ny Fikirakira iOS, tsy mila miditra amin'ny Cydia.
Tsindrio raha hamafa ny tweak avy amin'ny iOS Settings miaraka amin'ny PrefDelete
PrefDelete Si Tsy voasedra 1.2.0 maimaim-poana BigBoss
PrefDelete dia misy amin'ny repo ofisialy BigBoss tsy andoavam-bola, noho izany tsy mila mandany euro na iray aza izahay hanandramana ity rindranasa ity.
Raha vantany vao alaina ny PrefDelete, dia tsy ho hitantsika amin'ny menio rehetra fa napetraka izy io satria tsy misy safidy hikirakira azy. Mba hijerena ny asany dia ilaina ny manana tweak izay manana safidy fanovana satria ny PrefDelete dia tsy miasa afa-tsy amin'ny tweaks izay misy safidy fanovana ao anaty menio iOS Settings.
Raha amiko, Activator, dia manana menio ahafahantsika manova ny fihetsiky ny fihetsika tsirairay avy amin'ny menio Settings. Mba hamafana ny fanitsiana ao amin'ny Fikirakira iOS dia tsindrio mandritra ny segondra vitsy ny mari-pamantarana ny tweak resahina ary hisy varavarankely mipoitra izay milaza amiko raha tiako esorina izy na tsia Raha tiantsika hanjavona ao amin'ny iDevice misy antsika izany dia kitiho ny "Uninstall" y aorian'izay isika dia tsy maintsy manao lohataona iray hamongorana tanteraka ireo rakitra izay nahatonga ilay fanovana izay nofafantsika.
Araka ny hitanao, ny fandidiana dia tena tsotra ary tena ilaina satria tsy mila miditra amin'ny Cydia isika isaky ny te-hanafoana tweak, fa ny hany lesoka dia ny tsy ahafahantsika mamafa ireo fanovana misy fikirana ireo ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » PrefDelete: esory ireo tweaks avy amin'ny iOS Settings (Cydia)
CCSettings ho an'ny iOS 8: ampio bokotra bebe kokoa amin'ny Control Center
Navaozina i Pangu mba hialana amin'ny hafanana be loatra amin'ny fitaovana 32-bit